Umkhiqizi Nomhlinzeki Wekhamera Yedijithali YaseChina | DOWODA
Mirror opholile cleaner electroplated ezimibalabala PVD au ...
Izingxenye Auto ishidi isandla ipuleti ukucutshungulwa ishidi m ...
cnc CNC lathe icubungula inqubo engajwayelekile yensimbi ...
Elikhulu CNC ukucutshungulwa ngokwezifiso gong ukucutshungulwa ...
CNC aluminium ingxubevange ukucutshungulwa isandla okuhlola precisio ...
Izesekeli zensimbi zeshidi
Ikesi Lekhamera Yedijithali
igama lomkhiqizo Ikesi lekhamera yedijithali ye-Aluminium uhlobo lomkhiqizo Isigaba sedijithali
Izindlela zokucubungula Ukucubungula ngokwezifiso Icubungula uhlobo Umshini wokugaya we-CNC
Umjikelezo wokufakazela Izinsuku 3-7 Ukunemba ukuqeda
Icubungula umjikelezo Izinsuku eziyi-10-15 Ubukhulu obukhulu 500mm
Ubukhulu besimo 0.2 Ubude obukhulu 1500mm
Ukwelashwa komhlaba Ukuxhuma Ukubekezelelana komkhiqizo 0.01mm
Ukucubungula izinto i-aluminium
Ukusetshenziswa Komkhiqizo Izesekeli zekhamera yedijithali
Umshini wokugaya we-CNC ubizwa nangokuthi umshini wokugaya i-cnc, futhi izici zawo ezinkulu yilezi:
Izingxenye zingaguquguquki kakhulu futhi zivumelane nezimo, futhi zingacubungula izingxenye ezinobunzima obunzima kakhulu noma ubunzima bokulawula usayizi, njengezingxenye zesikhunta, izingxenye zegobolondo, njll.
Ingakwazi ukucubungula izingxenye ezingenakucutshungulwa ngamathuluzi omshini ajwayelekile noma kube nzima ukuzicubungula, njengezingxenye eziyinkimbinkimbi eziyindilinga ezichazwe ngamamodeli wezibalo kanye ne-3D space izingxenye ezigobile;
3.Ingakwazi ukucubungula izingxenye eziningi ze-I-sequence ngemuva kokucindezelwa okukodwa nokuma;
4. Ukucutshungulwa okuphezulu kokusebenza kahle, okuzinzile nokwethembekile ikhwalithi yokucubungula, okulingana nokushaya kwenhliziyo kwedivayisi yokulawula izinombolo ngokuvamile kungu-0.001mm, futhi uhlelo lokulawula izinombolo olunemba ngokunemba lungafinyelela ku-0.1μm.
Ngaphezu kwalokho, i-CNC machining nayo igwema amaphutha we-opharetha;
5. Izinga eliphakeme lokuzenzekelayo kokukhiqiza linganciphisa amandla womsebenzi we-opharetha. Inikela ekuphathweni kokuzenzekelayo;
6. Ukusebenza okuphezulu kokukhiqiza, imishini yokugaya i-CNC ngokuvamile ayidingi ukusebenzisa imishini yenqubo ekhethekile enjengezinto ezikhethekile, futhi idinga kuphela ukubiza izinhlelo zemishini, ukubamba amathuluzi nedatha yethuluzi egcinwe kudivayisi ye-CNC lapho kushintshwa izinto zokusebenza, okunciphisa kakhulu ukukhiqizwa . umjikelezo. Umshini wokugaya we-CNC unemisebenzi yomshini wokugaya, umshini oyisidina, nomshini wokubhola, okwenza inqubo igxile kakhulu futhi ithuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza. Ngaphezu kwalokho, isivinini sokuphotha nesivinini sokuphakela somshini we-CNC wokugaya uguquguquka ngokungahambisani, ngakho-ke kunenzuzo ukukhetha inani lokusika elilungile;
Ngakho-ke ungabala kanjani ijubane elingaphezulu lesigayo sokuphela ngesikhathi senqubo yemishini yomshini wokugaya we-CNC? IHongweisheng Precision Technology izokwabelana nawe:
1. Thola ububanzi be-drill. Ungakwenza lokhu ngenye yezindlela ezimbili. Okokuqala, ungalinganisa ububanzi besigayo sokuphela bese uhlukanisa ngo-2 ukuthola i-radius. Isibonelo, ukwehlukanisa u-5 mm ngambili _. Kukhiqizwa indawo engaba amamitha amabili wepeni. Noma, bopha i-tape isilinganiso ngamaphoyinti ukuthola ipherimitha bese uhlukanisa ngenani
Ku-2x PI (3.14). Isibonelo, uma okuzungezile kungamamilimitha ayi-12.56, irediyasi ingamamilimitha amabili.
2. Iyunithi ye-velocity emisiwe ye-angular yi-Hertz end mill. Uma une-angular velocity RPM, bese uhlukanisa ngama-60 ukuthola iHertz. Isibonelo, i-600RPM ingu-10 Hz.
Langaphambilini Aluminium ingxubevange umzimba
Olandelayo: Imishini yokuxhumana ye-Aluminium alloy
Icubungula ngokwezifiso kwe-CNC
CNC Izingxenye Icubungula ngokwezifiso
Ukukhiqizwa Kwamaqoqo Amancane
CNC Machining Ezakheke Okhethekile
Imishini emikhulu ye-CNC
Aluminium isandla prototype modeling proof cnc proc ...
Mirror opholile cleaner electroplated P ezimibalabala ...
CNC aluminium ingxubevange ukucutshungulwa isandla okuhlola pre ...
Nokufakwa insimbi engagqwali
Iphaneli ye-Aluminium chassis
Cnc Machining Center Icubungula, Icubungula i-Hand Hand Board, Imishini Yezinsimbi Zemishini, Cnc Precision Izingxenye Icubungula, Cnc Engagqwali Icubungula, 5-eksisi CNC Lathe,